Nrụpụta na ụlọ ọrụ China Bracket | Yongguang
Bracket bụ ihe eji eme ngwa ahịa maka sistemụ eriri ọkụ na usoro nnyefe. Ha nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche, dịka brake transita, na-arịgo arịọnụ, breeki na-ejide ihe, njide njide, bralos recloser, bracket Second, cutout braket, brattet bracket bracket na post insulator bracket. anyị nwere ike dịka ndị ahịa chọrọ hazie hazie.
Ihe-aru Iron, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa
Emechaa Dacha Galvanize na-ekpo ọkụ
Ndochi usoro nrụgide: enwere usoro abụọ dị mkpirikpi ụdị nrụgide, 1. A na - enwe ike idozi ngwa ngwa, dị ka ụdị ụdị esemokwu esemokwu, ihe a na - atụgharị, nwere ike idozi oge. 2. Ndị na-ejighi clamps, dị ka mkpakọ ọnụ clamps dị mkpa iji kwekọọ ogologo waya zuru oke. Typesdị ụdị mkpịsị akpụ akpụ bụ ll -1, ll -2, ll -3, ll -4, wdg.
Site na ahụmịhe anyị buru ibu na mpaghara a, anyị na-enwe ike imepụta ma na-eweta ngwanrọ okporo osisi dị elu. A na-eji akụkụ ndị a iji wuo nnukwu osisi na pylons. Ngwa anyi bu ihe eji adi nma ma di inogide. A na-eji nlezianya enyocha ngwaike ndị ahụ enyerela aka iji wee hụ na ọ dị oke mma. Na mgbakwunye, nnukwu ụgbọ njem anyị na-enyere anyị aka ịnapụta ngwaike okporo osisi n'otu oge a kapịrị ọnụ.
Ókè anyị gụnyere
Bargba mmanya na-agbanwe agbanwe
Ihe nkwụnye insulation
Debe eriri ahụ
Iko (oval eye)
Anchor bolt (timim
Oval eye bootu
Kedo eriri (kwụ ọtọ / gbagọrọ agbagọ)
Bolt (anya abụọ)
Riagegbọ okporo igwe kposara
Mkpanaka nkwekọrịta tupu mkpị
Buru onye njide izipu ozi
Ogwe aka gi
Ọkpụkpọ spare (eriri abụọ)
Kacha akụ nku anya
Nkwado Iron (bootu na aku)
Secondary etiti (wires atọ)
Thimble nut aku
Nkwado Iron (pin, pin)
Ngalaba / ọdụ ụgbọ
Anyi na-agbasi mbọ ike maka ọdịdị nke ngwaahịa anyị. Ndị niile na-achọ mkpuchi na-erubere 100% IEC ma ọ bụ ụkpụrụ ANSI isi. Anyị na-ekwe nkwa na ọnụego ruru eru nke ngwaahịa tupu ha aga bụ 100%. Ngwaahịa e bugara na United States, United Kingdom, Vietnam, Italy, Russia, Greece, Argentina, Chile na obodo na mpaghara ndị ọzọ. Iji hụ na ngwaahịa dị mma, ụlọ ọrụ agafeela maka9001: 2008 njikwa sistemụ njikwa ogo mma, na ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ iji nweta ezi aha.
Omume ije ozi dị mma, oge nzaghachi ngwa ngwa, nnyefe n'oge, ọrụ na ike mgbanwe bụ ihe anyị na-eme kemgbe anyị bidoro. Ọnụahịa asọmpi, ezigbo mma na nnyefe oge. Ihe ndi a nile bu anyi nyere anyi. Anyị nwere olile anya na ị nwere mmasị na ngwa ahịa anyị ma nabata gị nke ọma ijikọ gị ọnụ maka abamuru nke ibe.
Gara aga: Ball Ball
Ọzọ: Clevis aku
Nkọwa: Mgbachi, bụ mpempe U dị mpempe U nke echekwara na mkpọchi ma ọ bụ gbachiri oghere, ma ọ bụ mkpọchi ọla na-ejikọ aka na ntinye mkpọchi mkpọchi ngwa ngwa. Ihe mgbochi bụ ụzọ kachasị ejikọ na ụdị sistemu niile, site na ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ruo na ngwa ahịa ụlọ ọrụ, ebe ha na-ahapụ ngwa ahịa dị iche iche ijikọ ma ọ bụ jikọta ngwa ngwa. Anyị nwere ọtụtụ ụdị egwu a, anyị na-emekwara ndị ahịa anyị ihe ịchọrọ ha. General ...
A na-eji mkpanaka ala na ihe eji eme ya iji nye onodu ihe omimi n’ime ala niile ka o wee me ka ihe ngbota nke elu ala na nke ike oku di n’iru na elu, nke di elu na elu igwe eletriki, ulo elu na elu. ngwa nkesa ike. Anyị nwere ọtụtụ ụdị Earth Rod, nke ahụ ga-adabere na ihe ndị ahịa chọrọ ụdị ụdị Rod Rod 1.Anyịnya Enweghi Mkpo Earth 2.Galvanized steel Earth ...
Anyị nwere ụlọ ọrụ ịkpụzi ngwá ọrụ nke anyị. Anyị na-enwe ike ịhazi ngwaahịa ndị dabere na ihe ndị ahịa chọrọ. Ndochi usoro nrụgide: enwere usoro abụọ dị mkpirikpi ụdị nrụgide, 1. A na - enwe ike idozi ngwa ngwa, dị ka ụdị ụdị esemokwu esemokwu, ihe a na - atụgharị, nwere ike idozi oge. 2. Ndị na-ejighi clamps, dị ka mkpakọ ọnụ clamps dị mkpa iji kwekọọ ogologo waya zuru oke. Typesdị ụdị akpụ akpụ akpụ akpụ bụ ll -1, ll -2, ll -3, ll -4, wdg